Ụdị na ụdị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na nkọwa na foto (site na agba) - Green agwa - 2020
Agwa: ụdị na iche
A na-elezi bean dị ka calorie dị ala na ngwa ngwa digestible, nke bụ ezigbo isi iyi nke ike, nke a bụkwa eziokwu maka ọtụtụ ụdị (nke a gosipụtara na nkọwa ha). Otú ọ dị, ọ bụghị mgbe nile ka ọ dị, na nhazi mbụ nke ịzụlite omenala, a na-eji osisi ahụ eme ihe ịchọ mma.
N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere ụdị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-enye gị ohere iri nri ọ bụghị nanị na ha ga-eri onwe ha, kama ọ bụ dum pods. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na isi ihe kachasị anya maka ọdịiche dị iche iche dị iche iche bụ agba nke pods.
Ụdị ọcha: iche
Nkọwa nke agwa agwa
Ụdị Black: Ọdịiche dị iche iche
Ụdị acha uhie uhie kachasị mma
Egwu na-acha ọbara ọbara na-adịkarị ka ewu na-acha ọcha. Nke a abụghị ihe ijuanya, n'ihi na ha nwere nnukwu protein (8 g kwa 100 g) na antioxidants. N'ihi ihe ndị dị otú ahụ, mkpụrụ ndụ uhie na-eme ka ọ pụta ìhè ọbụna na-achọpụta ihe ndị bara uru, n'ihi na ọ bụ antioxidants na-echebe ahụ mmadụ pụọ na nkwonkwo radionuclides ma mee ka usoro ịka nká belata. Tụkwasị na nke ahụ, anya uhie nwere ọtụtụ vitamin na eriri, nke iji mee ka akpụkpọ ahụ dịkwuo mma ma nwee mmetụta bara uru n'ahụ usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ.
Ọ dị mkpa! Naanị 100 grams nke agwa kwa ụbọchị ga-enye gị ego dị mkpa nke ihe ndị a, bụ nke na-eme ka ọ ghara ime ka shuga dị ọcha, ma na-egbochi ọrịa nje na ọbụna ụbụrụ.
O doro anya na ọ bụghị ihe ijuanya na ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị baa uru na-akọ na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ. Otú ọ dị, n'ihe banyere acha uhie uhie kwesịrị ịkpachapụ anya, n'ihi na ha na-egbu egbu. Usoro ọgwụgwọ ga-enyere aka ibibi nsị, naanị nri ga-adịru ala ma ọ dịkarịa ala minit 10. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, a ga-etinye ya na mmiri.
Enwere ụdị uhie dị iche iche. Ya mere, ndo yiri nke a nwere ike inwe ma agwa Asia, yana ịkwado ma ọ bụ osisi ohia na osisi uhie. Ụdị a na-ahụkarị mkpụrụ nke ụdị agwa.
Onye nnochite anya kachasị mma nke dị iche iche na-acha uhie uhie na mba anyị bụ Skorospelka, Tomato, Tashkent, Middle Red, Etiopia na Adzuki. Dịka ụdị agwa dị iche iche, ha niile nwere ụdị nke ha dị iche iche ma nwee ike iche na ọdịdị na ọdịdị. Dịka ọmụmaatụ, mkpụrụ ọka Harrowing zuru oke na 55-60 ụbọchị mgbe a kụrụ ihe, àgwà ha bụ àgwà dị ogologo ma dị mma, nakwa dị ka agba odo-acha ọbara ọbara. Tomato - ezigbo maka ịchekwa na nri omenala ndị Georgian. Mkpụrụ nke dịgasị iche iche bụ oblong, aja aja na agba ma dị ntakịrị nke dị n'akụkụ. Tashkent dị mma maka ịkụ ihe na mpaghara ndịda nke mba ahụ, ebe ọ na-ahọrọ ihu igwe na-ekpo ọkụ. Otú ọ dị, na-eji usoro ozuzu nke ịzụlite, ị nwere ike inweta ezigbo mkpụrụ na mpaghara mpaghara nke mba ahụ.
Anyị agaghị akọwacha ihe niile dị iche iche na-acha uhie uhie ugbu a, ma mgbe ị na-azụ mkpụrụ, na-ege ntị na nke a mgbe niile, n'ihi na agwa, dị mma maka ịmalite n'ọnọdụ ụfọdụ, adịghị adabara ndị ọzọ.
N'etiti ụdị dị iche iche nke ndị na-eto eto, nke a na-enyekarị n'ogige ahụ, eriri odo na-anọchi anya. Nnukwu osisi ya na-egbukepụ egbukepụ dị ka ọka nkịtị, ọ bụ ezie na n'aha ha, n'etiti ndị nnọchianya nke agwa odo ka na-acha odo odo.
A na-eji agwa bekee iji kwadebe efere dị iche iche (soups, sws, salads) ma kwadoro maka ịchọta, esi, ịkọ agbọ, ịkwọ ụgbọ mmiri, ịkwa ụcha ma ọ bụ ịkwọ ụgbọ mmiri. Otú ọ dị, a na-ejikarị ya nri na raw, n'ihi na nke a bụ otú ọ na-ejide ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke uru bara uru. Ụdị ụdị edo edo kachasị mma bụ obi ike, nke na-enye mkpụrụ ọka buru ibu na 41-56 ụbọchị mgbe germination. Otu ihe dị iche iche nke osisi a dị sentimita iri anọ n'obosara na-acha odo odo, nke na-acha ọbara ọbara. Ogologo nke uzo bụ 12-16 cm.
Ị ma? Dika akwukwo nri akwukwo nri, enwere ndi toro na nani nke iri na ise.
A na - eji ụyọkọ ọcha, karịa nke niile, mara protein (kwa 100 g - 7 g), ya mere, agwa a dị mma maka ndị mmadụ na-ata ahụhụ. Ojiji nke bekee ọcha ga-aba uru maka ndị okenye, n'ihi na, n'etiti ihe ndị ọzọ, ọ nwere ọtụtụ ígwè, nke na-enye aka ewusi usoro obi obi ma meziwanye ahụ ike.
Mgbe isi nri, ihe kachasị mma na-acha ọcha agwa na akwụkwọ nri, nke nwere nnukwu vitamin C. Dị ka ụdị "agba" ndị ọzọ, otu ìgwè bekee dị ọcha na-ejikọta ọtụtụ agwa dị iche iche, n'etiti ha bụ osisi shrub, na-arịgo ma ọ bụ na-eji akwa ákwà. A na-etolite ha niile dị ka nkà na ụzụ ahụ si dị, mkpụrụ a na-adaberekarị na iche iche na nlebara anya n'oge oge ọkọchị. N'etiti otu agwa kachasị mma, Black Eye dị iche - a na-ahụ ya site na obere mkpụrụ osisi na akpụkpọ anụ, ekele nke ị na-adịghị mkpa oge dị ukwuu iji dozie agwa a (ị nwere ike ime n'enweghi ya).
Ị ma? Ihe dịgasị iche iche nwetara aha ya n'ihi ntakịrị ntụ ojii nke dị n'ahịrị na-acha ọcha nke agwa..
Chali - n'adịghị ka nke gara aga, ụdị a dịgasị iche iche na-ama oke mkpụrụ, nke a na-ejikarị eme ihe na nkwadebe nke isi nri. Ihe mere na nke a bụ nnukwu nrụpụta nke agwa, nke na-eme ka o kwe omume na obụpịa ma gheechaa agwa.
Nevi bu umu anu ndi ndi oru ugbo na-eji ya eme ihe n'iri ya na ígwè, nke nwere mmetuta bara uru na aru mmadu.
N'ime ndị nnọchianya ndị ọzọ na-acha ọcha, enwekwara ụdị ọcha dị iche iche, Belozerka na White mares, nke, ọ bụ ezie na a na-etolitekarị n'obere ụlọ ezumike, enwetabeghị ọkwa dị otú a dịka akọwapụtara n'elu.
Na-ekwu maka agwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọ gaghị ekwe omume ịghara ịkpọ mkpụrụ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke ụfọdụ n'ime ụdị ndị kacha mma na-anọchite anya ya. Onye nnọchite anya nke ezinụlọ legume nwere pods na-eru 6-20 cm n'ogologo, nke ọ bụla nke 3 ruo 8 osisi chara n'onwe. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na nke mbụ a kpọtụrụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ndị ọkà mmụta sayensị achọtala akwụkwọ ndị China gbasara narị afọ nke abụọ BC. A chọtara ihe onwunwe niile dị na South America, bụ ebe ndị Inca na Aztec toro na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Banyere ọdịnala na-eri nri nke mba ndị Europe, ebe a, ọdịnala nke iji obere mkpụrụ osisi beans apụtaghị tupu narị afọ nke iri na asatọ. A na-eri nri na-edozi oke na ose kwa izu, na-ewepụ mkpụrụ osisi ahụ. Ha nwere ike inwe ụdị dịgasị iche iche: site na ọkọlọtọ (asparagus, "French" ma ọ bụ agwa Kenyan) na obere (mkpụmkpụ 7-13).
Ọ dị mkpa! A na-ahụkarị ụdị agwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ya na palette ya. E nwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-egbuke egbuke, greenish green, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha odo odo na ọbụna odo pods, mana agba nkịtị ka na-acha akwụkwọ ndụ.
Ụdị kacha mma dị otú a gụnyere asparagus na agwa agwa. N'okwu mbụ, ndị a bụ eriri ubu a na - enweghị atụ (Tendergreen dị ka otu n'ime ihe kachasị mma), na nke abụọ, tinye ya na - acha odo odo na ude nke na - ejide agba ha mgbe ha na - esi nri (ọ bara uru ịnwale Kinghorn Wax). Tụkwasị na nke ahụ, mkpụrụ ndụ akwụkwọ ndụ na-ejikarị osisi bekee, nke na-esiri ike ma ọ bụrụ na ị na-atụfu oge ha na-egbute. Ihe kachasị mma n'etiti osisi ndị a na-atụle Prince na Hunter.
Ejiri odo odo na-acha odo odo na-acha odo odo, na-eru n'ogologo 12 cm Ọtụtụ mgbe, a na-akpọ ụdị a "Georgian" ma ọ bụ "ire ọhịa", ma aha atọ ahụ na-ezo aka na osisi osisi ndị nwere osisi olive na-acha odo odo.
Achịcha dị mma ma sie ma raw, ma n'ikpeazụ, ọ ka mma iji ụdị ntanetị. Ọ bụrụ na mkpụrụ osisi ahụ na-achabiga ókè, mgbe ahụ, a na-ewepu ha na pọọl ma sie ya iche iche.
Otu ihe dị mkpa nke agwa odo odo bụ mgbanwe na agba n'oge ọgwụgwọ okpomọkụ. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị kpebie ka esi nri ndị ahụ, ha ga-efunahụ odo odo na-acha odo odo ma nweta ụcha acha akwụkwọ ndụ. Ụdị ụdị àgwà a dị ịtụnanya bịara site na India na China, ebe a na-esi nri ma ndị na-eto eto ma ọ bụ ndị na-eto eto na-ejighị ya.
N'etiti ụdị agwa, a na-ahụkarị n'ụlọ ezumike, ndị nnọchianya nke agwa bekee, nke, ọ bụ ezie na ọ na-adịkarị karịa ọcha na uhie, bụ nke a na-ewere dịka ezi ubi maka ịgha mkpụrụ, abaghị uru. Ha nwere protein karịa otu uhie uhie na ọcha (ruo 9 g), nke pụtara na ọ bụrụ na ọ dị mkpa, mkpụrụ nke osisi dị otú a nwere ike dochie anụ ahụ n'ụzọ dị mfe, karịsịa nyochaa na njirimara nke ndị na-edozi protein bean dị nso na protein anụmanụ .
Na mgbakwunye na uru ndị dị n'elu, a ghaghị itinye normalization nke nghazi ọgwụ na afo, nke na-ejikarị eji oge ndị dị otú ahụ eme ihe mgbe nile, na uru nke mkpụrụ osisi ojii.
Nyere na ndị na-elekọta anụ ụlọ adịghị arụsi ọrụ ike na-azụlite mkpụrụ osisi bekee, mgbe ahụ, ụdị nke osisi a abụghị nke ukwuu. Nke kachasị mma n'ime ha bụ:
Akụrụ agwa bụ akụrụ na-acha odo odo na ụcha ọbara ọbara. Dị ka ọ dị na agwacha acha odo odo, agba agba ojii na-agbanwe mgbe a na-esi ya, mgbe nke ahụ gasịrị, ha na-atụgharị pink. Mgbe isi nri, akpụkpọ anụ bekee na-aghọ nke dị nnọọ njọ.
Ụdị dị iche iche dị iche iche na mkpụrụ osisi agba ọgaranya na agba chaa chaa mara mma, ya na ude mmiri n'ime. Isi njirimara atụmatụ nke a dịgasị iche iche bụ ìhè beri okpukpo, karịsịa mara mma mgbe nri agwa. Banyere ọgwụgwọ okpomọkụ, a ghaghị esi nri maka Preto agwa ruo ogologo oge (ọ dịkarịa ala minit 90), na-eburu mmiri na mbụ. Nri nke nwa ojii a bụ nnọọ ihe a kapịrị ọnụ ma nwee ederede na-atọ ọchị, na-enwe obi ilu na-enweghị isi.
Achịcha ojii na ụdị ya niile nwere ike ịnọchite anya ya na-arịgo, na-akwa ákwà, na osisi ohia. Na-emekarị, a na-eri nsị n'ụdị efere, ma a na-agbakwụnye ha na klas mbụ. N'ezie, agwa bekee, nwere ike ime ka soups ma ọ bụ borscht dịkwuo ụtọ ma baa ọgaranya.
Ị ma? Ọtụtụ mgbe, ị nwere ike ịhụ agwa bekee na efere ndị Mexico, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ - na French, na-acha uhie uhie - dị mma iji jupụta burritos ma ọ bụ dịka ihe dị iche iche nke ose chi. N'otu oge ahụ, bekee ọcha bụ ngwaahịa zuru ezu, n'ụzọ zuru oke jikọtara ya na ngwaahịa ndị ọzọ nke agba ọ bụla, kpuchie ha n'ụzọ dị ịtụnanya.
Ihe ọ bụla ụdị ị na-ahọrọ maka ịgha mkpụrụ n'oge ụlọ okpomọkụ gị, n'ọnọdụ ọ bụla, ị ga-enweta ihe mgbakwunye pụrụ iche maka efere dị iche iche, nwere ọtụtụ vitamin bara uru na ihe ndị na-achọpụta.